Sir Alex Ferguson Oo Ka Haday Super League: "Waa In Laga Guuro Tartamadan 70 Jirka Ah" - Laacib
HomeWararka Champions LeagueSir Alex Ferguson Oo Ka Haday Super League: “Waa In Laga Guuro Tartamadan 70 Jirka Ah”
Sir Alex Ferguson Oo Ka Haday Super League: “Waa In Laga Guuro Tartamadan 70 Jirka Ah”
April 19, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa taageeray tartanka cusub ee burburinaya Champions League, hoosna u dhigaya tartamada awoodda iyo xiisaha horyaallada maxalliga ah ee European Super League, kaas oo xalay ay shaaciyeen 12 ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee Yurub.
Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in la gaadhay waqtigii laga guuri lahaa horyaallada iyo tartamada 70 jirka noqday, taageereyaashuna ay xiisayn doonaan.
Fiidkii hore ee Axaddii shalay ayay dunida ciyaaruhu gilgilantay kaddib markii uu soo baxay war-saxaafadeed kaga qaylisiiyey xidhiidhada kubadda cagta ee UEFA & FIFA, sidoo kalena ay jawaabo degdeg ah ka bixiyeen tartamada maxallig ah ee Premier League, Serie A & LaLiga.
Tartankan oo loo arko in uu lid ku yahay Champions League oo uu meesha ka saarayo, ayay isku urursadeen 12 kooxood oo xalay magacyadooda iyo bayaannadooda soo saaray, kuwaas oo ay gadaal kaga biirayaan saddexda kooxood ee Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo PSG.
Kaddib markii warkani soo baxay falanqeeyeyaasha kubadda cagta ayaa iyaguna qayliyey, waxaanay qaarkood ku baaqeen in kooxahan ganaaxyo culus la saaro oo heerarka labaad ee horyaalladooda loo celiyo.
Laakiin tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in la gaadhay waqtigii isbeddel la samayn lahaa, lagana guuri lahaa tartamadan 70 jirka ah.
Isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayuu yidhi: “Ka hadalka Spuer League waa in laga guurayo tartamada kooxaha Yurub ee 70 jirka noqday. Aniga oo ah ciyaartoy kooxda Dunfermline 1960meeyadii iyo tababaraha Aberdeen oo ku guuleystay European Cup Winners’ Cup, kooxaha yaryar ee Scotland, waxay u ahayd sidii aan korayno Buurta Everest.
“Everton ayaa garoon cusub ku dhisanaysa £500 milyan oo Gini iyadoo damaceedu yahay in ay ku guuleysato Champions League. Dhamaan taageereyaasha ayaa jecel in tartankani sidiisa ahaado.
“Waqtigaygii United, waxa aanu ciyaarnay afar final oo Champions League, waxaanay mar walba noo ahaayeen habeenno gaar ah.
“Ma hubo in Manchester United ay qayb ka tahay (tartanka cusub), maadaama aanan qayb ka ahayn go’aamada kooxda.”